Milateriga Nigeria oo magaalo hor leh ka qabsaday Boko Haram - Jowhar.com-Somali News Leader
You are here: Home / Wararka Milateriga Nigeria oo magaalo hor leh ka qabsaday Boko Haram
by A M | Tuesday, Mar 17, 2015 | 1868 views
Milateriga Nigeria ayaa dib ula wareegay magaalada waqooyi bari ku taal ee Bama, halkaasoo Kooxda Islaamiga ah ee Boko Haram gacanta ku hayeen.
Bama ayaa aheyd magaalo dhowr jeer ay weeraro ku qaadeen Boko Haram, waxaana ugu dambeyn ay la wareegeen lix bilood ka hor.
Boko Haram ayaa la soo wariyay in khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka looga qabsaday magaalada Bama ee ka tirsan Gobolka Borno.
Afhayeenka Milateriga Nigeria Gen Chris Olukolade ayaa sheegay in jab xoogan u geysteen Boko Haram, ayna haatan u carareen dhinaca xuduuda Chad sida uu yiri.
Sidoo kale Milateriga ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Goniri oo u dhow Gobolka Yobo, waana magaaladii saddexaad ee Boko Haram laga saaro.
Howl galka ballaaran ee ka dhanka ah Boko Haram ayaa u muuqda mid si dar dar leh ku socdo, iyadoo ciidamo ka socda dalalka Galbeedka Afrika ay qeyb ka yihiin howl galkan.
Boko Haram ayaa todobaad ka hor ku dhawaaqday inay ku biirtay dowladdaIslaamiga ee fadhigooda yahay Ciraaq iyo Suuriya.
Ilaa 13-kun oo ruux ayaa ku dhintay weerarada Boko Haram tan iyo sanadkii 2009-kii, sidoo kale waxaa ku barakacay ilaa hal milyan iyo bar.
Hogaamiyihii Ikhwaanul Muslimiinka Masar oo dil lagu xukumay
In ka badan shan ruux oo ku geeriyooday shil gaari ka dhacay duleedka Muqdisho